sai nyunt lwin: October 2012
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု အမှတ်တရ
အခုတစ်လောဖတ်ရတဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်ဖို့ စာရင်းတင်သွင်းကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါလာပါတယ်။ ၀မ်းသာစရာ သတင်းကောင်းပေါ့ဗျာ။ သမ္မတကြီးသာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရရင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စု တစ်ဝှမ်းလုံး နိုင်ငံသားအားလုံးက ၀မ်းသာပျော်ရွှင်ကြမှာ မလွဲပါဘူး။ ဂုဏ်ယူလို့ မဆုံးဖြစ်နေကြမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအဖို့လည်းဘဲ အာစီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် နှစ်ဦးရှိနေတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစရာ သိပ်ကိုကောင်းမှာပါ။ အခုဆိုရင် ဒီသတင်းကို ကြားကြတဲ့ ပြည်သူတွေကလည်း ဆုချီးမြှင့် ခံရဖို့ကို ၀ိုင်းဆုတောင်းနေကြမှာ မလွဲပါဘူး။
အဲဒီအကြောင်းတွေကို စဉ်းစားမိတော့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်က ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးကို ပြန်သတိရမိသွားပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ် အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် အဖြစ်ရွေးချယ်ကြောင်း ကြေညာပြီး တစ်ပတ်လောက်မှာ ထင်ပါတယ်။ ရက်စွဲကတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ရရှိတဲ့အကြောင်း တစ်ပြည်လုံး အုံးအုံး​​ကြွက်ကြွက် ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆီကို ဖိတ်စာတစ်စောင်ရောက်လာပါတယ်။ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီရုံး (အဟောင်း) နေရာကို နေ့လယ် ၁၂ နာရီ အရောက်ကြွခဲ့ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ပါတီတွေထဲမှာ အချင်းချင်းပြောဆို နောက်ပြောင်နေကြတာရှိပါတယ်။ ဖိတ်စာ ရပြီလားဟေ့ ဆိုရင် ဒါ ခေါ်ပြီး ဆူတော့မယ် ပူတော့မယ် ဆိုတဲ့ သဘောကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း ဒီလိုမျိုး နောက်ပြောင်နေကြ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း ဖိတ်စာရပြီပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘာအတွက် ဖိတ်တာလည်း အကြောင်းအရာကိုတော့ မသိကြ ပါဘူး။ ခေါ်ရင်တော့ ရှောင်နေလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ အတိအကျကို သွားရပါတယ်။ အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော်နဲ့ အတူသွားကြတာက ကျွန်တော်တို့ပါတီ ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့ထဲကို ခေါ်ထားတယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ ပါတီတွေ အတော်များများ ရောက်နေတာတွေ့ ရပါတယ်။ ဘာအကြောင်းအရာနဲ့ ခေါ်ထားသလဲ ဆိုတာ မသိကြခင်မှာဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရတဲ့အကြောင်းကို ၀ိုင်းပြီး ပြောနေကြတာပါ။ ဝေဖန်နေကြတာပါ။ ရှုထောင့် အမျိုးမျိုးကနေပြီး ပြောနေကြတာပါ။ မကြာပါဘူး ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီရုံးအဟောင်းရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာ စားပွဲတစ်ခုစီမှာ တပ်ကြပ်ကြီးစာရေးတစ်ယောက်စီဟာ ဖိုင်တွဲတစ်ခုကို ရှေ့ချထားပြီး ပါတီတွေရဲ့ အမည်ကို ခေါ်ပြီးတွေ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ပြဿနာက စတော့တာပါဘဲ။ စားပွဲလေးငါးလုံး ခွဲပြီးချထားပါတယ်။ စားပွဲတစ်လုံးကို ဘယ်ပါတီဆိုပြီး တာဝန်ခွဲဝေထားကြပုံ ရပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့ချင်းကို ခေါ်ပြီး ပြောပါတယ်။ အခု မကြာခင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်တာဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲကို ထဲထဲဝင်ဝင် ၀င်ရောက်နှောက်ယှက်တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းရေးကို ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တာဖြစ်ကြောင်း။ ဒါကြောင့် ဒီလိုဆုချီးမြှင့်ခံရတာကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ သဘောမတူကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးပါ ဆိုပြီး တောင်းဆိုပါ တော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့က ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စက ကျွန်တော်တို့ ပါတီနဲ့ မသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ဘာမှ သဘောထားမှတ်ချက်မပေးလိုကြောင်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီမှာ အခြေအတင်တွေဖြစ်ပြီး အတော်ကြာနေပါတော့တယ်။ တစ်ခြားစားပွဲက ပါတီတွေကတော့ ဘယ်လိုဖြေရှင်း သွားကြသလဲတော့ မသိပါဘူး။ ပြောကြဆိုကြပြီး အသီးသီး ပြန်သွားကြပါတော့တယ်။ ညနေစောင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ပါတီနဲ့ ဆရာကြီး ဦးစောမြအောင်နဲ့ ဦးအေးသာအောင်တို့ ခေါင်းဆောင် တဲ့ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တို့ဘဲ ကျန်နေပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ထိုင်နေတဲ့ စားပွဲရှေ့ကို ဖြတ်ပြီး ဗိုလ်မှူး ရာထူးတံဆိပ်တပ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်က ခြေသံပြင်းပြင်းနဲ့ ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် လျှောက်နေပါတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ အတော့်ကို ဒေါသထွက်နေပုံ ရပါတယ်။ ခင်းထားတာက ပျဉ်ကြမ်းခင်းဆိုတော့ သူ့စစ်ဖိနပ်ခြေသံက အတော့်ကို ကျယ်လောင်ပါတယ်။ သူ့ပခုံးပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ရာထူးတံဆိပ်တွေက ရွှေရောင်တောက်နေသလို သူ့ဘယ်ရင်အုံပေါ်က တံဆိပ်ရောင်စုံတွေဆီက ရောင်ပြန်ဟပ်လို့လားမသိပါဘူး သူ့မျက်နှာက နီမြန်းနေပါတယ်။ ခါးမှာလည်း သေနတ်နဲ့ စကားပြောစက်တွေနဲ့ တစ်ခြားကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာတွေ ချိတ်ထားတာလည်း အပြည့်ပါဘဲ။ အဆိုးဆုံးကတော့ တင်းမာခက်ထန်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာနဲ့ သူ့ရဲ့ ပါးစပ်က ထောက်ခေါက်သံ၊ ဆောင့်နင်းနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ခြေသံတွေပါဘဲ။ တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ အလကားကောင်တွေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်မချစ်တဲ့ကောင်တွေ ဆိုပြီး ရေရွတ်နေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ ဘာမှမပြောပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နားကနေ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လျှောက်နေတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အခြေအတင်ပြောနေတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးလည်း ဘယ်မှာ မျက်နှာကောင်းနိုင်ပါတော့မလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ နောင်အခါမှာတော့ ထောက်လှမ်းရေး -၁၄ က တပ်မှူး လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလောက်အမူအရာတွေနဲ့ အတင်းအကြပ် လုပ်နေတာကို အံ့လည်းအံ့သြတယ်။ စိတ်လည်း အတော်ပျက်မိတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ရှင်းပြတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ရတာ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ချင်းအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဂုဏ်ယူတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ NLD ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကို ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို ဆုပေးတာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပါတီထဲမှာတော့ ဒီကိစ္စကို ထည့်ဆွေးနွေးတာ မရှိခဲ့ဘူး။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ပေးတာဆိုရင်တော့ ဆွေးနွေးကောင်း ဆွေးနွေးပါမယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်အကြောင်းကတော့ ပါတီထဲမှာ ဆွေးနွေးတာ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာသဘောထားမှ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပါတီအနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှ လက်မှတ်ထိုးစရာ မရှိဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက် မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာကို လက်မှတ်မထိုးနိုင်ဘူး ဆိုပြီး ငြင်းနေခဲ့တာပါ။
အတော်ကြာလာတော့ ဆရာကြီး ဦးစောမြအောင်နဲ့ ဦးအေးသာအောင်တို့ အဖွဲ့က ထပြန်သွားပါတယ်။ '' ဒါဘဲနော် နက်ဖြန်နေ့လယ် ၁၂ နာရီအထိ ကျုပ်တို့ ဒီမှာ စောင့်နေမယ်။ လာဖြစ်အောင် ပြန်လာရမယ် " လို့ အသံမာမာနဲ့ လှမ်းပြီး ပြောလိုက်သံကြားရပါတယ်။ ဟော ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့ဘဲ တစ်နည်း ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ဘဲ ကျန်တော့ တာပေါ့။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်တာဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်စွက်ဖက်တယ်။ ပြည်တွင်းရေးကို စွက်ဖက်ခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ ပါတီမှာ ဆုံးဖြတ်ဆွေးနွေးထားတာ မရှိလို့ လက်မှတ်မထိုးနိုင်တာ ဖြစ်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ရှင်းပြပေမဲ့ မရပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းရေးကို ရှုပ်အောင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တာဖြစ်လို့ လက်မခံနိုင်ကြောင်း လက်မှတ်ထိုး ဖို့ချည်း ပြောနေပါတော့တယ်။ နေကလည်း အတော်စောင်းလာပါပြီ။ ခြေသံတွေကလည်း ပိုပြင်းလာပြီး ပါးစပ်က တောက်ခေါက် သံတွေလည်း ခပ်စိပ်စိပ် ဖြစ်လာနေပါပြီ။
နည်းလမ်းရှာတဲ့အနေနဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးကို စာသားနည်းနည်း ပြောင်းလို့ မရဘူးလားလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာကြီးကလည်း ချက်ချင်းဘဲ သူ့အရာရှိဆီကို ထသွားပြီး တင်ပြပါတယ်။ နောက် ပြန်လာပြီး စာရွက်လွတ် တစ်ရွက်ထိုး ပေးပြီး ဘယ်လိုပြင်ချင်လည်း ရေးပါ လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မတတ်သာတဲ့အဆုံးမို့ စာရွက်ပေါ်မှာ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ရှုပ်ထွေးအောင် ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ မထောက်ခံပါဘူး လို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြဿနာ ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။
အခုနေ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့..... တကယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အခိုင်အမာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေရမှာပါ။ အမှန်ကို ၀န်ခံရရင် အဲဒီတုန်းက နိုင်ငံရေးပါး မ၀သေးပါဘူး။ ရပ်တည်ချက်ကလည်း မခိုင်မာသေးဘူးလို့ဘဲ ၀န်ခံရတော့မှာပါ။ မိုးကလည်းချုပ်တော့မယ်။ သူတို့ဖက်ကလည်း အလျှော့ပေးမယ့်ပုံလည်းမရှိပါ ဘူး၊ စိတ်ဓါတ်ကျတယ်ဆိုတာထက် အတော်ကို စိတ်ပျက်နေလှပါပြီ။ ဗိုလ်မှူးရဲ့ တောက်ခေါက်သံ ခြေပြင်းပြင်းနင်းနေသံ တွေကိုလည်း အတော်စိတ်ပျက်နေမိပါပြီ။ မြန်မြန်ပြီးဖို့ဘဲ စိတ်ကူးရှိနေပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ "ဆိုခဲ့ရင်" ဆိုတဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုံးလေးကို သုံးပြီး နှစ်ဖက်အတွက် ထွက်ပေါက်ရှာလိုက်ရတာပါ။
အခု ကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေအရ သမ္မတကြီးကို ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု အတွက် လျာထား စာရင်းမှာ ပါတယ်ဆိုတော့ လွန်ခဲ့တာတွေကို ပြန်သတိရမိပြီး ရေးလုိုက်တာပါ။ တစ်ဆက်ထဲမှာဘဲ အကယ်၍သာ သမ္မတကြီး ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရခဲ့ရင် ခြေသံပြင်းပြင်းနင်းနေတဲ့ ဗိုလ်မှူးရဲ့ မျက်နှာ ဘယ်လိုနေမှာပါလိမ့်။ နောက်ထပ်တစ်ဖန် ဒေါသ ထွက်နေအုန်းမလား။ ထောက်ခေါက်သံတွေ ညံနေအုန်းမလား။ နှစ်ဖက် ပြေလည်ရာ ပြေလည်ကြောင်း "ဆိုခဲ့ရင်" ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတွေများ ထပ်ပြီး ရှာရလေအုန်းမလား။ စိတ်ကူးကြည့်မိပါတယ်။
ကဲ ခင်ဗျားတို့ကကော ဘယ်လို တွေးမိပြီး ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ?
အခုတော့လည်း တွေးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုကို ဥရောပ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ ကို ချီးမြှင့်လိုက်လို့ပါ။ ဟိုးအရင်က လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ချို့ တွေးထင်ခဲ့သလို မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို ရှုပ်ထွေးအောင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တာ (ဆိုခဲ့ရင်) ဆိုတာတွေလည်း စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ မြန်မာ့ဂုဏ်သိက္ခာ ထပ်တက်ရမယ့် အခြေအနေကတော့ လွဲသွားတာပေါ့လေ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး ချီတက်မှုကြီး အနှောက်အယှက် ကင်းကင်းနဲ့ ချီတက်နိုင်ပါစေဗျာ။
၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ (၁၈) ရက်။
Posted by sainyuntlwin at 09:520comments
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအား သုံးသပ်ခြင်း
ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကြီးပြောင်းလဲနေပြီလို့ တစ်ချို့ကတော့ ပြောကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ဘာမှထူးမလာပါဘူးလို့ ဘူး ခံပြီး ငြင်းဆိုနေကြတယ်။ တစ်ချို့က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကို စီးပွါးရေး ရေချိန်နဲ့ တွက်ချက် တာလည်း တွေ့ဖူးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ် ပြီး လွှတ်တော်ထဲရောက်သွားတာကို ကြည့်ပြီး ပြောင်းနေပြီလို့ပြောကြပါတယ်။ ပြောကြတာကတော့ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာ ရှိနေလုပ်နေသူတွေတောင်မှ ဘာပြောရမှန်း မသိလောက်အောင် ဝေဖန်နေကြတာပါ။ ဒီလို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ သုံးသပ်ဝေဖန်လာကြတာဟာ တကယ်တော့ အားတက်စရာ ဖြစ်ရပ်တွေပါ။ အရင်ကဆိုရင် ဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့ မပြောနဲ့။ အကြောင်းအ ရာလောက်ကိုတောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောကြရတာပါ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အချုပ်ကို စိစစ်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီကနေ့ အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ "အမျိုး သားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး" နဲ့ " ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး " တို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ကိုတော့ အစိုးရက ဆောင်ရွက်နေတာ ထင်သာမြင်သာပါတယ်။ အစိုးရ အဆိုအရဆိုရင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ဆယ့်တစ်ဖွဲ့ ရှိတာမှာ အခုဆို KIO တစ်ဖွဲ့ဘဲ အပစ် အခတ်ရပ်စဲဖို့ လိုတော့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက ဒီလောက်အဖွဲ့တွေအများကြီးကို အပစ် ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးရာမှာ တစ်ဖွဲ့စီ သီးခြားစီ ခွဲပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပစ်ရပ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုကြတာပါဘဲ။ အများကတော့ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကျေညာပြီး ဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာပါ။
အားလုံးလောက်နီးပါး အဆင်ပြေခဲ့ပြီးမှ KIO နဲ့ကြတော့ ထစ်နေရပါတယ်။ KIO က ၁၇ နှစ် အပစ်ရပ်စဲခဲ့ပြီးပြီမို့ နိုင်ငံရေးကိစ္စကိုဘဲ စဆွေးနွေးမယ်ပြောပါတယ်။ အစိုးရကတော့ အပစ်ရပ်စဲကြပြီး တော့မှ နိုင်ငံရေးကိစ္စဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီး ကွဲပြားနေကြပါတယ်။
အစိုးရဖက်က ပြည်နယ်အဆင့် မူဝါဒလုပ်ငန်းတာဝန် (၅) ရပ်နဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် မူဝါဒ လုပ်ငန်းတာဝန် (၈) ရပ်ဆိုပြီးချမှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြည်နယ်အဆင့်မူဝါဒကို ချန်ထားပြီး ပြည် ထောင်စုအဆင့် မူဝါဒ လုပ်ငန်းတာဝန် (၈) ရပ်ကိုတော့ ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ပြည်ထောင်စုအတွင်း အမြဲအတူတကွ ပူးပေါင်းနေထိုင်ရေး (ခွဲမထွက်ရေး)
(၂) ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး တို့ကို သဘောတူရေး (ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို လက်ခံရေး)
(၃) စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနဲ့အညီ နှစ်ဖက်ပူးတွဲ၍ တရားဝင် ဆောင်ရွက်ရေး။
(၄) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများတိုက်ဖျက်ရေးအား ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး။
(၅) ပါတီ ထူထောင်၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး။
(၆) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား လက်ခံရန်နှင့် ပြင်ဆင်လိုသည့် ကိစ္စများရှိပါက လွှတ်တော် အတွင်း၌ အများသဘောတူဆန္ဒနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ရေး။
(၇) ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဥပဒေဘောင်အတွင်းသို့ အပြီးအပိုင်ဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့အညီ တန်းတူ နေထိုင်၊ သွားလာ၊ လုပ်ကိုင်၊ စားသောက်ရေး။
(၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး။
အထက်ပါ အချက်တွေကို ကျေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အတော်များများက ဝေဖန်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလောက ကရော၊ ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူတွေကရော ဝေဖန်ကြတာပါ။ နံပါတ်စဉ် လေးအထိ ကတော့ ဆွေးနွေးစရာသိပ်မရှိပေမဲ့ နံပါတ်ငါးအဆင့်က စပြီးတော့ ပြောကြဆိုကြရလိမ့်မယ်လို့ ပြော နေကြပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတိုင်မီမှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သော အစည်းအဝေးကြီးတစ်ရပ် ကို နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသွားမည်လို့လည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောပါတယ်။ All inclusive အားလုံးပါဝင်ကြရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်တော့ အလွန်အားတက်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် လက်တွေ့စဉ်းစားကြည့် လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကြီးကိုဘဲ မျက်စိထဲပြန်မြင်နေမိပါတယ်။ အဲဒီလို ညီလာခံမျိုးဆိုရင်တော့ " အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး" ဆိုတာ အတော်ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ All inclusive ဆိုပြီး တွေ့သမျှကို ခေါ်ပြီးလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေး ညီလာခံမျိုးဆိုတာ လက်တွေ့မှာ အဖြေမှန်ရဖို့ အလွန်တရာခက်ခဲလှပါတယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးကြီး မျိုးမတိုင်မီမှာ အစည်းအဝေးကလေးပေါင်းများစွာ၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ လိုနေပါသေးတယ်။ အဲဒီအဆင့်ကို ကျော်လွှားသွားလို့မရပါဘူး။ အားလုံးပါဝင်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ဖို့ ရာ ကြားထဲမှာ လှေခါးထစ်ပေါင်းများစွာကို နင်းကျော်ဖြတ်သန်းရပါအုန်းမယ်။ အဲဒီလို လှေခါးထစ် ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီးမှသာ အားလုံးပါဝင်သော အစည်းအဝေးကြီးမှာ အများသဘောတူညီ တဲ့ အခြေခံမူများကို ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ပြနေတာက လက်တွေ့သဘောနဲ့ပါ။
လောလောဆယ် နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း ပြည်တွင်းပြည်ပ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အကြီးအသေး အားလုံးပေါင်း နှစ်ဆယ့်တစ်ဖွဲ့ လို့ သိရပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၄-၁၆ အထိ ဇင်းမယ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီလာခံ ဆိုတဲ့အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားသူစာရင်းမှာ တွေ့မိပါတယ်။ ပြည်ပမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အ စည်းတွေ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာကတော့ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ မှတ်ပုံတင်ထားကြတာမို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိပါတယ်။ ပါတီပေါင်း ခြောက်ဆယ်လောက် ရှိနေပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက် အဖွဲ့တို့ ၊ Myanmar Egress တို့ ဆိုတာလည်း နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ် ပုံတင်မထားပေမဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ နှက်နှက်ရှိုင်းရှိုင်း နေရာယူထားကြပါတယ်။ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း တစ်ချို့ကလည်း နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်နေကြတာ ရှိနေပါတယ်။
စာရင်းပြုစုကြည့်ရုံနဲ့တင် ခေါင်းမူးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ All inclusive ဆိုတဲ့မူကို အခြေခံပြီး မျှမျှတတ စဉ်းစားကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဟာက အဖွဲ့အစည်း အမည်တွေဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ သဘောထားတွေက အမျိုးမျိုး ရှိနေပါသေးတယ်။ ဇင်းမယ်မှာ ကျင်းပသွားခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ညီလာခံ ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးကနေ အဆင့်(၆)ဆင့်ပါတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စီမံချက်နဲ့ လမ်းပြမြေပုံ ဆိုပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
သူတို့ပြောတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် -
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အစိုးရရဲ့ ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးပြီး နှစ်ဖက်တပ်များ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ် (Military code of conduct) ကို ပြဌာန်းဖို့။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ကာလမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် အာမခံချက်ပေးဖို့။ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ အာမခံချက်ပါတဲ့ သဘောတူညီ ချက်ရှိရမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ နိုင်ငံတကာ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ပါဝင် စောင့်ကြည့်မှုကို ခွင့်ပြုရမယ်။ မြေယာအပါအ၀င် သဘာဝအရင်းမြစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မဟာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကြီးတွေကို ရပ်တန့်တားမြစ်မှု လုပ်ရမယ် စတဲ့ ပဏာမ ဆွေးနွေးရေး၊ ပဏာမ ဘုံသဘောတူချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ရေး အဆင့်တွေ ဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ် (၆) ချက် မှာတော့ .......
(၁) တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်ထုအပါအ၀င် Civil Societies တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြီး "နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ မူဘောင် "(Framework for Political Dialogue) တွင် ပါဝင်မည့် အချက်အလက်များကို သဘောတူ ချမှတ်ရန်။
(၂) ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ စုစည်းထားသော ကိုယ်စားလှယ်များအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ "တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောထား" ( The Framework of Political Dialogue) သဘောတူညီချက်ရရှိရန်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် -
(က) ဘက်နှစ်ဘက်မှ လက်ခံနိုင်သောနေရာတွင် ဆွေးနွေးရန်။
(ခ) ဆွေးနွေးစဉ် နှင့် သဘောတူညီချက်များကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင် ဘက်မ လိုက်သော နိုင်ငံတကာ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ထားရှိရန် နှင့် သဘော တူညီချက်များကို အများပြည်သူသိရှိအောင် လွတ်လပ်သော မီဒီယာများမှ တဆင့် ပူးတွဲထုတ်ပြန်ရန်။
(၃) ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုများအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှ "တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောထား" ( The Framework of Political Dialogue) သဘောတူညီချက် ရရှိပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက်သော်လည်း ကောင်း၊ လူမျိုးအလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားတို့၏ ညီလာခံများကျင်းပပြီး ရှင်းလင်းညှိနှိုင်း သဘောထား ရယူသွားရန်။
(၄) တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်အဖွဲ့ အစည်း များအပါအ၀င် civil societies အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ ပါဝင်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံ ညီလာခံတစ်ခုကို ခေါ်ယူကျင်းပသွားရန်။
(၅) တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒီမိုကရေစီနည်းအရ လှုပ်ရှားနေကြသော နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ အချိုးညီပါဝင်ပြီး အင်အားစု သုံးခုစလုံး လက်ခံနိုင်သောပုံစံဖြင့် ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စုညီလာခံကြီး တစ်ရပ် ကျင်းပသွားရန်၊ ထို ညီလာခံကြီးမှ ချမှတ်သော သဘောတူညီချက်များကို "တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု သဘောတူညီချက်" (Union Accord) အဖြစ် သဘောတူ လက်မှတ်ရေး ထိုးရန်။
(၆) သဘောတူညီချက်များကို "တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု သဘော တူညီချက်" (Union Accord) ကို အချိန်အတိအကျ သတ်မှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက် သွားရန်။
ဆိုပြီး အင်တာနက်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
တစ်ဖက်ကလည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ပုံစံကို လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မဏ္ဍိုင်ကြီး ခြောက်ရပ်ကို တွေ့ရပါလမ့်မယ်။
- ဥပဒေပြု မဏ္ဍိုင် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်)
- တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် (တရားလွှတ်တော် အဆင့်ဆင့်)
- အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင် (သမ္မတများနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့် )
- သတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်း မဏ္ဍိုင် (စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင် ဟုဆိုကြသည်)
- ပြည်သူလူထု မဏ္ဍိုင်
- တပ်မတော် မဏ္ဍိုင် ဆိုပြီးတွေ့ရမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ တပ်မတော် မဏ္ဍိုင်ဆိုပြီး သုံးနှုန်းလိုက်တာကို တွေ့ရတော့ အံ့သြနေပါလိမ့်မယ်။ အမှန်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေ့လာလိုက်ရင် တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက သိပ်ကို ကြီးနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အခု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ တပ်မတော်ဟာ မိမိတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို မိမိဖာသာ လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး အဆင့်ဆင့်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရွေးစရာမလိုဘဲ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အချိုးကျ ပါဝင်ခွင့် ရထားပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်မှာ ပါဝင်တဲ့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်သလို ပြန်ခေါ်ပြီး လိုအပ်တဲ့သူနဲ့ အစားထိုးခွင့်လည်း ရှိနေတာကို သတင်းစာတွေမှာ မြင်နေကြရမှာပါ။ အဲဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးကို အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှာတောင် အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။ တစ်ခြားနေရာ တွေမှာလည်း ပြောရင် အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ တပ်မတော်ရဲ့ အရေးပါမှုကို ပြောချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီးတွေထဲမှာ ထည့်မထားလို့ မရနိုင်ကြောင်း ပြောလိုတာပါ။
ဇူလိုင်လ(၃)ရက်နေ့မှာ အစိုးရအနေနဲ့ ထိပ်ဆုံးက အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင် ပါဝင်တဲ့ " ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ" ဆိုတာကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဥက္ကဌ အဖြစ်ပါဝင်ပြီး အဖွဲ့ဝင် အားလုံး (၁၁) ဦးပါဝင်ပါတယ်။ သမ္မတ ၊ ဒုတိယသမ္မတ နှစ်ဦး ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ၊ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် ၊ သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တို့ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဗဟိုကော်မတီထဲမှာ "အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး နဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ " ၀င် (၁၁) ဦးထဲက အဓိကကျသူ (၉) ဦးပါဝင်နေပါတယ်။ " ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ" ဟာ "အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ " နဲ့ သိပ်ခြားနားမှု မရှိဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သဘောကတော့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကို နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်တဲ့ သဘောမျိုး မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုချင်တာက ကြားမှာနေပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ အစိုးရရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် သဘောမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ အစိုးရဘက်က ဆွေးနွေးမဲ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အဲဒီ အုပ်စုကြီးတွေရဲ့ကြားကို ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသူ ( facilitator ) လုပ်ပေးမယ့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ပဋိပက္ခတ် တွေမှာ မှတ်သားဖူးတာကတော့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်တာက ဝေဒနာ ပွန်းတီးမှု နည်းတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
စေ့စပ်ဆွေနွေးတဲ့ ကိစ္စမျိုးဟာ သိပ်မြန်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ နှေးနေလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ အခြေ အနေ၊ အချိန်အခါ နဲ့အညီ ဘယ်ဘက်ကိုမှ မျက်နှာမလိုက်ဘဲ တစ်ထစ်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ခြင်း၊ တစ်လှမ်း ခြင်း သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး အင်နဲ့အားနဲ့ ပြည်သူတွေက ၀ိုင်းဝန်းအားပေးထား ခြင်းခံရတဲ့ ပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကိုလည်း မေ့ချန်ထားလို့ မရပါဘူး။ တိုင်းရင်း သားလူမျိုးစုပါတီတစ်ချို့က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပင်လုံ ကဲ့သို့သော ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ဖို့ တာဝန်ပေးအပ်ကြောင်း ကြေညာပြီး တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း လက်ခံယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတာဝန်က ကြီးလေး လွန်းလို့ ကျန်လူတွေကလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး အရွေးချယ်ခံရ ၊ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်နေကြပါပြီ။ အလုပ်အကိုင်များနေလို့များလား မသိ။ ပင်လုံကဲ့သို့သော ညီလာခံကြီးဆိုတာကတော့ ခုထိ ပြန်ပေါ် မလာသေးဘူး။ လေသံလည်း မကြားရပါဘူး။ ပြီးသွားတာတော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။
၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ကတော့ အခုလောလောဆယ်ဆယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး အပစ်ရပ်စဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် ၀င်ရောက်ဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကောင်းပါ တယ်။ မကြာမီ တစ်ချိန်ချိန်မှာ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးကြတော့မယ်ဆိုရင် သူတို့ကို ဘယ်လို အနေအထား ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ မြင်ရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ တစ်ခုပါဘဲ။ Myanmar egress ကတော့ အခုကိုဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ဆိုပြီး အစိုးရအဖွဲ့ထဲကို ရောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ကို အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုထဲက ယုံကြည်နေတာမျိုးထက် ကျန်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် သူတို့တွေဟာ ကြားဝင်အကျိုးဆောင်သူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန် အထိတော့ အားလုံးက သူတို့ကို အစိုးရအကျိုးဆောင်အနေနဲ့ အစိုးရလူတွေ အဖြစ်မြင်နေတယ်လို့ ပြောဆိုဆွေးနွေးနေတာ ကြားနေရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလောကမှာ အထင်ခံရတာမျိုး အတော်ကို သတိထားကြရပါတယ်။ လေသေနတ်နဲ့ အပစ်ခံရတာလို့ တင်စားပြကြပါတယ်။ ဖြေရှင်းဖို့ အတော်ကို ခက်တတ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်းမှာ Peace Center ဆိုပြီး ရုံးတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့ သေသေချာချာ မသိရသေးပါဘူး။ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသား အတော်များများ ပါဝင်တယ်လို့တော့ ကြားနေရပါတယ်။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စကို လုပ်မယ်ကိုင်မယ် ၀င်ကူညီကြမယ်ဆိုရင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ၊ ထင်သာမြင်သာရှိမှုက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အခုဆိုရင် စကားဝိုင်းတွေမှာ မေးနေကြတဲ့ မေးခွန်းတစ်ချို့ကို ကျွန်တော် မဖြေနိုင်ဘူးဖြစ်နေ ပါတယ်။ သူတို့မေးခွန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စက ပြီးသွားပြီလား ? ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကိစ္စကတော့ မပြီးသေးတာ သေချာပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာတော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ အားလုံးက ရောနှောသွား ကြတာကိုး။ ပြီးသွားပြီလား ။ မပြီးသေးဘူးလား အဖြေရခက်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ တစ်ခုထဲ ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာစရာပေါ့။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကိစ္စ အောင်မြင်သွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ အဲဒီလို မေးခွန်းတွေက ကျွန်တော့်ကို အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ မဖြေတတ်ဘူးလေ။­­
ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ခေါင်းမူးစရာတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာဘဲ လက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ပေါင်း ခြောက်ဆယ်လောက်ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တတွေက အစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်ပြီး ပြည်သူ့စစ်လုပ်နေတာမို့ အပစ်ရပ် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတော့ ပြော စရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေ စကားပြောကြမယ် ဆိုတဲ့အခါ သူတို့တတွေကို ပါဝင်ခွင့် မပေးခဲ့ရင်တောင် သူတို့ကိစ္စက မဖြစ်မနေဆွေးနွေးရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ဒေသတစ်ခုမှာ လက်နက်ကိုင်ဆိုလို့ တပ်မတော်ကလွဲပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းသာ ရှိနေတာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ စဉ်းစားရင် ကျွန်တော်တို့ အတော်ကြီးကို ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ လိုနေသေးကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ အတော်ကြီးကို ကျန်နေပါသေးတယ်။
အခုအခြေအနေက အပစ်ရပ်ရုံ ရပ်ထားကြတဲ့ အခြေအနေပါ။ တွေ့ဆုံစကားပြောဖို့ ပြင်ဆင် နေကြတဲ့အချိန်ပါ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက် တံခါးစဖွင့်တဲ့ ကာလတစ်ခုပါ။ ဘက်တွေအားလုံးက စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားကြပြီး နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မှာပါ။ အမျိုးသားချင်း ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ သင့်မြတ်နိုင်မှာပါ။
တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အတွေးအမြင် ၊ ခံယူချက် ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ မတူ ကွဲပြားကြတာဟာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီး နိုင်ငံတော် အတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်မယ့် အဖြေထုတ်နိုင်ကြဖို့ကသာ အဓိက လိုရင်းဖြစ်ကြောင်းပါ။
Myanmar Independent Journal
အတွဲ(၂၁) ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ (၄) ရက်နေ့ထုတ်
Posted by sainyuntlwin at 08:230comments